Diyaaradda 'Xiaomi Mi Drone' waxay ku haysaa shay shaki ah qaab kale | Wararka IPhone
Xiaomi wuxuu bilaabay suuqyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ... koobiyeynta?
Mid ka mid ah qaybaha sii kordhaya aadna u sii socon doona isbeddelka muddada gaaban waa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Dhamaan qaababka, cabirka, midabada iyo qiimayaasha, way adagtahay inaadan ka helin kalabar kaaga wanaagsan kuwa sameeya kuwa awood u leh inay ku guuleystaan ​​qalbigaaga iyagoo harraad u qaba xiisaha iyo khibrado cusub. Waana taas, wixii ka baxsan moodeellada hiwaayadda, cutubyo leh qayb xirfadeed sare ayaa la bilaabayaa in la arko, oo leh astaamo noo oggolaanaya inaan sameyno dhammaan noocyada dogob iyo kamarad fiidiyoow ah oo aad ku qabato xoogaa tallaal ah oo aad uga tagi karto furan -waxaa laga wada helay dhamaan asxaabteena.
Kuwii ugu dambeeyay ee tareenka fuulay waxay ahaayeen kuwa Xiaomi, oo kamid ah shirkadaha Aasiya ee soo ifbaxaya gudaha iyo dibedda qaaradeeda iyo Waxay umuuqataa inay go’aansatay inay daboosho inta ugu badan ee suurtogalka ah markay tahay bixinta wax soo saarka. Layaab ma ahan, Xiaomi Mi Drone cusub ayaa ku xiraya astaamo qaar la mid ah DJI's caanka ah Phantoms, moodooyinka ugu caansan ee loogu talagalay dadka jecel diyaaradaha aan duuliyaha laheyn maanta.
Waxaan u qaadan karnaa in istiraatiijiyadda shirkaddu tahay inay u kuurgasho shirkadaha waaweyn ee qaybaha kala duwan iyo dib u soo kabashada waxyaabaha ugu guulaha badan ee kuwan iyaga u gaar ah, oo innaguna aad uma niqaadan lahayn. Shirkadda lafteeda waxay horeyba u xaqiijiyeen in qaybta hal-abuurka aysan hadda ku jirin mudnaantooda, markaa wax lala yaabo maahan inaad aragto tixraacyo cad oo ku saabsan alaabooyinka kale ee horeyba ugu jiray moodelladooda.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, iyo sidii caadiga ahayd, tani macnaheedu maahan inaanan la kulmeynin badeecad balan qaadeysa inay dejineyso baarka aad u sarreeya marka la eego tayada iyo qiimaha. In ka badan $ 350 waxaan ku heli karnaa diyaarad nuuca aan duuliyaha laheyn oo leh astaamo aad loo aqbali karo taasina waxay noo oggolaan doontaa inaan ku dhowaanno khibradda lahaanshaha mid ka mid ah moodooyinkaas heerka sare ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Xiaomi wuxuu bilaabay suuqyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ... koobiyeynta?
Apple waxay xiiseyneysaa saldhigyada lagu dalaco gawaarida korontada ku shaqeysa
Splice, oo ah tifaftire fiidiyow ah oo heer sare ah qiimaha ugu fiican ee suurtogalka ah